UZille kumele axolise - ANC | isiZulu
UZille kumele axolise - ANC
UZille 'akanamsoco' - ANC e-E Cape
I-ANC ivulele uZille icala
UZille unomona ngoZuma - Mthembu
Johannesburg - I-ANC kanye nophiko lwayo lwabesifazane bafuna umholi weDA uHelen Zille axolise, bathi waqamba amanga ngesikhathi ethi wayengazi ukuthi uTelkom uxhase isidlo sasekuseni seThe New Age ayesihambele.
"Ngokubona kwe-ANC, izikhathi eziningi uHelen Zille uyakubalekela ukukhuluma iqiniso,” kusho isikhulumi seqembu uJackson Mthembu esitatimendeni ngoLwesithathu.
"Ucasha ngokuthi uyizwi labantu ekubeni elibalekela iqiniso futhi edukisa nomphakathi.”
IDemocratic Alliance ithe isazosibhekisisa lesi sitatimende se-ANC bese iyaphendula ngokuhamba kwesikhathi.
NgoMsombuluko, uZille uhoxile ukuhambela isidlo sasekuseni sebhizinisi ebesihlelwe yiNew Age kulandela imibiko ethi lowo mcimbi uxhaswe ngezimali zomphakathi.
Uthe yena nezinye izikhulu eziphezulu zeDA ezikhathini ezedlule bebeyihambela futhi bekhuluma emicimbini yeNew Age ngoba bebenolwazi lokuthi iyona iNew Age efaka izimali kanye namalungu asuke ethenge amathikithi okungena.
"Kodwa manje ngoba sekuyacaca ukuthi isidlo sasekuseni besixhaswe ngezimali zomphakathi ngamabhizinisi kahulumeni, iDA ngeke isazithamela."
Esitatimendeni lapho ebechaza khona ngokuhoxisa kwakhe, uZille uthe uhoxe ngemuva kokufunda iphephandaba iCity Press, okuyilo leli phephandaba elibike ukuthi u-Eskom, uTelkom kanye noTransnet bachithe izimali ezishisiwe ngemicimbi, ngesikhathi neSABC nayo ngapha ibasakazela ngaphandle kokubakhokhisa.